Ambohimarina : Sabata 18 janoary 2014 - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
Fifaliana hatrany no iarahana amin’ny Fiangonana Apokalypsy eto Madagasikara isaky ny Sabata. Ny Sabata 18 Janoary 2014 lasa teo dia nitsidika sy nitondra ny tenin’Andriamanitra ho an’ireo mpino maro be teo amin’ny Fiangonana Apokalypsy Andramanja Iavoloha ny pasitera Mailhol sy ny ankohonany.
Tetsy Ambohimarina Itaosy kosa dia nisy ny fiarahabana ny pasitera Alpha RAKOTONIRINA mivady sy ny ankohonany noho ny nahatratrana ny taona vaovao 2014. Taorian’ny lanonana fiarahabana azy ireo kosa dia niroso tamin’ny toriteny ny fiangonana. Araky ny perikopa iraisan’ny Fiangonana Apokalypsy manerana izao tontolo izao dia nalaina tao amin’ny bokin’ny Salamo 50: 6-15 sy ny filazan-tsaran’i Jaona 13: 1-11 ary ny I Tesaloniana 5: 12-28 izay toriteny izay. Nisongadina nandritra io fotoana io ny amin’ny fitiavan’i Jesosy ny fiangonana sy ny anjara nomaniny ho antsika. Notsindrian’ny mpanompon’Andriamanitra tamin’izany kosa anefa ny zavatra takian’i Jesosy amin’ny fiangonana, dia ny fifandraisana tsara aminy izany.
Nampiavaka ity fotoana tetsy Ambohimarina Itaosy ity ihany koa ny fijoroana vavolombelona nataon’ireo misionera 20 mirahalahy, izay hiatrika indray ny fihofanana ho evanjelistra etsy Karmela itaosy. Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy tamin’io sabata io rahateo ny fiofanan’izy ireo, izay tsy hifarana raha tsy amin’ny volana Jona 2014 raha sitrapon’Andriamanitra.
← Holy art thou – chant prière
Josiane – Jesosy Magnafaka →